Ezenziwe indwangu angenisa ukukhanya, umoya, njengoba umoya nolwandle, lolwandle ingubo sekungamakhulu zonyaka eziningi uhlala omunye Amathrendi ethandwa kakhulu emhlabeni of fashion wesimanje.
Umbala izingubo ezinjalo zingase zishintshe kakhulu. uphizi ezinkulu nezincane, yezicathulo ngemifanekiso lamazwe exotic izitshalo, izinyoni ezishisayo Abstraction weJiyomethri, izithelo namanzi futhi ezimibalabala noma ezinombala ofanayo izinguqulo zonke imibala rainbow - wonke fashionista unelungelo lokukhetha imodeli ewubuciko kakhulu. Kodwa ngisho izingubo ulramodnyh kakhulu khona baneHholo imithetho design kanye canons.
Modern lolwandle ingubo ke
inombolo okungenani amalunga omzimba;
Futhi isitayela akuyona nje khulula ukuhlala sibalo. Gqoka Gait likhona, kahle ukuma kufaneleka lapho kuphephetha kahle egcizelela tan. Nge ukuncishiselwa okulula onobuhle eziningi angadingi amakhono ekhethekile lokuthunga. Ngakho-ke, ubophele noma thunga lolwandle ingubo Silhouettes ehlukene ngaphansi amandla craftswomen ngisho ekuqaleni. Ake nihlale eminye imininingwane ezinye zazo.
Ukuze amaphethini unxande okudinga ingxenye lendwangu nokunwebeka noma indwangu wathungela. Kungcono uma indwangu ngeke sidilike.
Ububanzi cut 3 okhalweni poluobhvata plus 10 cm encirclement khulula.
Ubude le imodeli kungaba ubani kusuka mini Maxi, konke kuncike esikuthandako.
Manje ukwenza armhole. Ngenxa yalesi usike umbuthano ikota nge ububanzi ka-15 cm phezulu lendwangu at emaphethelweni.
Kusukela Indwangu izinsalela usike emapheshana eside futhi sifake kuzo zibe izintambo ezimbili ngesimo kwamagoda. Lezi izintambo kukhona izintambo zethu.
Ngaphezu kwalokho, ezizibeni ithungwe kuya armhole. Imodeli lihlanzekile futhi kulawulwa ngalé.
Umsebenzi usuphelile. lolwandle Ukugqoka kwethu ngomumo.
Le modeli akuyona nje omunye elula kakhulu ekukhiqizeni izinto. Ukuthuthukiswa lesi sitayela wasebenza umklami Stilton Rich. Fashion umklami ubufuna ukudala isitayela enemisebenzi elingana kahle cishe kunoma iyiphi sibalo.
Wathungela Beach Dress
Lolu hlobo lwe-iholide ingubo uthayi silula. Rack futhi ukuphumula kusho kukhona calandze ezifanayo lapho ububanzi kuwebhu impahla oluhambisana ezingemuva futhi front ethangeni ububanzi plus obleganie 4cm mahhala, futhi ubude ikhethwa ezinqumela. Kodwa olufanele asanda babe wathungela izingubo mini futhi Okuningi yobude. Phezulu badinga ukuhamba cutouts okwenyanga entanyeni.
Sleeves kukhona calandze anobude 20 nobubanzi 50 cm. Ukuze lula emikhonweni ungahlukaniswa ngokuvamile musa ukubopha noma kanye indwangu eziyisisekelo.
Wathungela lolwandle ingubo eyenziwe ukotini ntambo lace wathungela. I degree of nokuvuleka kwe-iphethini incike uhlobo wonke amamodeli. Abanikazi sibalo esincane ungaphuma eziholela cross, kodwa ukunikeza ukubonakala aluhlaza ngaphezulu kungcono ukukhetha amaphethini longitudinal.
ingubo, akwamuke ingubo
Njengoba yaziwa, ilanga eningizimu ngempela okhohlisayo, ikakhulukazi ngezinsuku zokuqala ezimbalwa ogwini. ingubo, akwamuke ingubo kungaba okuhle kakhulu ngalabo abanezinkolelo ezingafani nje ufuna ukuthola enhle ngisho tan, kodwa futhi obakhathalelayo ukuphepha isikhumba sabo.
Iphethini ingubo efana esibonelweni ingubo wathungela. Umahluko owokuthi ukuthi khulula kufanelekile ngezifiso kangcono ukushiya kancane nokuningi - kusuka 6 kuya ku-10 cm.
ingubo lolwandle lomshado Elegant bakudinga umakoti abasha noma unkosikazi eholidini langemva komshado wabo. Ukuze ukukhiqizwa yayo njengesisekelo esingazithatha yimiphi onobuhle ezihlongozwayo. Umbala, yebo, emhlophe, kodwa kungenzeka wayengomunye wabo nezinye shades kanye nemibala - into esemqoka ukuthi nonkosikazi samjabulisa izingubo ezintsha. Indwangu ayevumela iphethini monophonic noma filigree e umbala isizinda sewebhu. Ihanimuni at ingubo enjalo ithenda qiniseka zikhunjulwe for a lifetime.
Amathoyizi ezenziwe iphepha - Kahle yezandla kumnandi ngezandla zabo
Suit uphizi ngezandla zabo. Indlela yokwenza yezembatho uphizi
Indlela yokwenza nesembozo yefoni yakho ngezandla zakho
Indlela ukukhetha khambi Folk ukhwehlela izingane
"Uma induku emlonyeni ibukeka ...": ukutadisha namasiginali isilawuli womgwaqo
Shoes okusha. Kanjani hhayi ukuthi usephutheni kukhethwa?
Nezenhliziyo. valve inhliziyo - lokuphila komuntu
Smith: abanomsebenzi othile
Nigella sativa: isithombe, ukutshalwa, izinsuku ukutshala
"Sweet Life": nabalingisi yochungechunge ngokuphila enhloko-dolobha, unvarnished
Indoor Shade Izitshalo for Interiors nokukhanya ongaphakeme
Amenorrhea kuyini na? Izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa amenorrhea
Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona emzini Kerch: amabhishi "Moscow", "Youth," "Izingibe"